सफलताका लागि 'समय व्यवस्थापन' : महत्वपूर्ण टिप्सहरु ~ Banking Khabar
सुरज घिमिरे ।
एक दिन एक पुस्तक पसलमा ग्राहक आयो । केही क्षण पुस्तक हेरिसकेपछि पसलको कर्मचारीसँग सोध्यो–“यो पुस्तकको मूल्य कति हो ?”
“एक डलर ।”
“केही कम हुन सक्दैन?”
“अहँ सक्दैन ।”
ग्राहकले केहीबेर अरु पुस्तक हेर्यो । अनि कर्मचारीसँग सोध्यो– “के तपाई पसलको मालिकलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ ? म भेट्न चाहान्छु ।”
पसले आएपछि ग्राहकले सोध्यो– “यो पुस्तक तपाईं कतिसम्म घटाएर दिन सक्नुहुन्छ?”
“सवा डलर ।”
ग्राहक अचम्ममा पर्यो । उसले सोध्यो– “तर भर्खरै तपाईंको कर्मचारीले यसको मूल्य एक डलर बताएका थिए ।”
“हो, उसले भनेको ठीकै हो । अहिले यसमा मेरो समयको मूल्य पनि जोडिएको छ ।”
“ठीक छ, अन्तिम पटक मूल्य बताउनुहोस् ।”
“डेढ डलर । तपाईं जति ढिलो गर्दै जानुहुन्छ, पुस्तकको मूल्य बढ्दै जानेछ । किनभने समयको मूल्य पनि यसैसँग जोडिदै जानेछ ।”
ग्राहकसँग अरु कुनै उपाय थिएन । उसले एक डलरको पुस्तक डेढ डलर दिएर किन्यो ।
समयको मूल्य थप्ने ती मालिक अमेरिकाका बेन्जामिन फ्रेन्कलिन थिए । जो पछि प्रख्यात आविष्कारक, राजनीतज्ञ र दार्शनिक बने ।
समयको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मानिस अफिस र समाजमा कहिल्यै पनि आफ्नो व्यक्तित्वको विकास गर्न सक्दैन । एक सफल व्यक्ति बन्न समय व्यवस्थापनले सहयोग गर्दछ । समयको महत्व नबुझ्ने र समय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति कहिले पनि व्यवस्थापक बन्न सक्दैन र ऊ माथिल्लो पदमा पनि पुग्न सक्दैन । समयमा परीक्षाहलमा नपुग्ने विद्यार्थी परीक्षा दिनबाट बन्चित हुनु पर्दछ । अन्तरवार्तामा समयमा नपुग्ने व्यक्तिले जागिर पाउन सक्दैन । समयमा निर्णय लिन नसक्दा संस्थालाई अर्बाैँको रकम नोक्शानी हुनसक्छ । तोकिएको समयमा साँवा–व्याज नबुझाउनेले हर्जाना तिर्नु पर्दछ । समयमा विमानस्थल नपुग्दा हवाइजहाज छुट्न सक्छ । ब्लडप्रेशरको रोगीले समयमा औषधि नखाँदा उसलाई हृदयघात हुनसक्छ । समयमा अस्पताल नपु¥याउँदा विरामीको मृत्यु हुनसक्छ । माथिका यी उदाहरणहरुबाट समय र समय व्यवस्थापनको कति महत्व छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुनजान्छ ।
बेन फ्रन्कलिनले समयलाई पैसा भनेका छन् (“Time is money.”-Ben Franklin) । हुन पनि हो समय मानिसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत हो, जसको सदुपयोग गर्नसके मानिस मालामाल हुनसक्छ । समय व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा नेपोलियनको एक भनाइ निकै सान्दर्भिक मानिन्छ । उनले भनेका छन् “तिमी मलाई युद्ध हार्दै गरेको भेटाउलाउ । तर, एक मिनेट पनि समय खेर फालेको भेट्टाउँदैनौँ ।” वास्तवमै समयको सही व्यवस्थापन भनेको समयको भरपूर उपयोग नै हो ।“Do it Today. Tomorrow will be too late” अर्थात् यसलाई आजै गर भोलि त धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ । वास्तवमै भोलि भन्ने कुरा कहिले पनि आउँदैन । भोलि त हाम्रो भ्रम मात्रै हो ।
फाल्तु कामका लागि समय खेर नफाली ठीक समयमा ठीक काम गरी उपलब्धी हासिल गर्नमा अग्रसर हुनु नै समय व्यवस्थापन हो । त्यसैले पनि समय व्यवस्थापनका निम्ति कामहरुको सूचि बनाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः ती कामहरु पूरा गर्दै जानु पर्दछ । विहानै उठ्ने, महत्व र जरुरीका आधारमा कामको विभाजन गरी समय व्यवस्थापन म्याट्रिक्सलाई ‘फलो’ गर्ने, फोन, इमेल, च्याट जस्ता कुराहरुका निम्ति अधिक समय खेर नफाल्ने, बोलीभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिने आदि उपायहरुको अबलम्बन गरी समय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
कुनै पनि काम सुरु गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यसको योजना बनाई लक्ष्य तथा उद्देश्यहरुको किटानी गर्नु पर्दछ । अनि कुन–कुन काम गर्न के–कति समय लाग्ने हो सोको लिस्ट तयार गरी महत्वका आधारमा ती कामहरुको रेङ्किङ्ग गर्नु पर्दछ ।
साप्ताहिक रुपमा गरिने कामहरुको सूचि निर्माण गर्ने । त्यसमा पनि आफ्ना उद्देश्य, कार्य र मानिसँग गरिने वार्तालापहरुलाई सूचिबद्ध गर्नु पर्दछ । यसबाट आफूले केकति महत्वका कामहरुका लागि के कति समय छुट्टयाइएको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । जसले गर्दा कम महत्वका कामका लागि कम समय र बढी महत्वका लागि बढी समय छुट्टयाउन मद्दत मिल्छ ।
कतिपय अवस्थामा ‘हुँदैन’ ९ल्इ० पनि भन्न सक्नु पर्दछ ।
महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भएपछि आफै पुरस्कृत गर्न सानो फङ्सन ९ँगलअतष्यल० को आयोजना गर्नु उचित हुन्छ । यसले समय व्यवस्थापनमा उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ ।
क) प्रण गर्नुः समय व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकताका आधारमा कामहरु गर्दै जानु पर्दछ । त्यसैले कुन काम कहिले गर्ने भनी तालिकीकरण गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राखिएको छ । तर, कतिपय अवस्थामा काम र समयको सूचि त बनाउने तर, त्यसलाई व्यवहारमा नउतार्ने गरेको पनि देखिन्छ । त्यसैले समय व्यवस्थापनमा ठीक समयमा ठीक काम गर्ने प्रण गर्दै सो कार्यलाई व्यवहारमा उतार्नु जरुरी हुन्छ ।
ख) मनोरन्जन गर्नुः सधैँ कसिलो सूचिका साथ काम गर्दा मानसिक तनाव पनि देखा पर्न सक्दछ । त्यसैले बेलाबेलामा विभिन्न किसिमका खेलकूद एवम् मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरु आयोजना गरी आफू र आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरुलाई सहभागी गराउनु पर्दछ । यसले उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग गर्दछ ।
ग) एक समयमा एक काम गर्नुः कतिपय मानिसमा एकै समयमा धेरै कामहरु गर्ने बानी पनि हुन्छ । तर, त्यो राम्रो होइन । एकैपटक धेरै काम गर्न खोज्दा साधनहरु टुट्ने, फुट्ने, मानिसमा एकाग्रता नहुने , काम विग्रिएर झन धेरै समय लाग्ने, कामको गुण्स्तर कायम हुन नसक्ने जस्ता विभिन्न समस्याहरु रहने गर्दछन् । मानिसको मगजले एक समयमा एक कार्य गर्दा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा विभिन्न अनुसन्धानहरुले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ ।
घ) खाली समय छुट्याउनुः प्रत्येक दिन प्रत्येक घण्टा रुटिनमा चल्नु पनि समय व्यवस्थापन होइन । दिनमा १÷२ घण्टा खाली समय पनि छुट्याउनु पर्दछ । विषेश गरी यस्तो समय शुक्रबार र शनिवार बढी छुट्याउँदा राम्रो हुन्छ । यस्तो समयमा थाँती रहेका कामहरु गर्ने, साथी भाइ, परिवा भेटघाट गर्ने, मानेरञ्जन गर्ने, योजना बनाउने जस्ता विविध कामहरु गर्न सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार यस्तो समयको उपयोग गर्दै जानु पर्दछ ।
समय व्यवस्थापन व्यवास्थापनको एक नविन अवधारणा हो । यसले उपलब्ध समयलाई के–कसरी उपयोग गरी लक्ष्य प्राप्त गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मार्ग प्रशस्त गर्दछ । आफ्ना कामहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा विभाजन गरी महत्वका आधारमा ती कामहरु सम्पादन गर्न उपलब्ध समयको सदुपयोग गर्नु नै समय व्यवस्थापन हो । समयको सीमालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो क्रियाकलाप वा स्वयम् आफूलाई व्यवस्थित गर्नुलाई समय व्यवस्थापन भनिन्छ । थोरै समयको प्रयोग गरी बढी उत्पादन गर्नु पनि समय व्यवस्थापनकै उपज हो । तर, सधैँ कसिलो सूचिका साथ काम गर्दा मानसिक तनाव पनि देखा पर्न सक्दछ । यस कूरामा सचेत हुनु पर्दछ । त्यसैले बेलाबेलामा खेलकूद एवम् मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरुमा सरिक हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसले उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग गर्दछ । (लेखक नेपाल बैंक लिमिटेड, बुर्तिबाङमा शाखा प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत छन् । )